Kuve nedambudziko nema link muIOS 9.3? | IPhone nhau
Kuve nedambudziko nema link muIOS 9.3? Edza izvi mhinduro
Pablo Aparicio | | iOS 9, Zvidzidzo uye zvinyorwa
[ONA]: Bug iyo inotaurwa nezvayo iyi posvo yakagadziriswa neiyo iOS 9.3.1 kuburitswa. Hechino chasara chinyorwa.
NeMuvhuro 21st, nguva pfupi yapfuura kuunza iyo iPhone SE uye iyo 9.7-inch iPad Pro, Apple yakatanga iOS 9.3. Sezvazviri mukuburitswa kwese, isu hatisi tese takagutsikana zvakaenzana, asi mune ino kesi hatigone kutaura nezve dambudziko diki, sekuderera kwekuzvitonga. iOS 9.3 yakauya ne bug inoratidzika kunge yakapararira iyo inodzivirira kuvhura zvimwe zvinongedzo kubva kune zvimwe zvinoshandiswa. Apple haisati yazivisa ruzivo rwekukundikana uku, asi iwe unofanira kungoverenga zvakataurwa nevaverengi ve iPhone News kuti uone kuti dambudziko riripo.
Zviri pachena kuti inotsamwisa glitch. Kusakwanisa kuvhura zvinongedzo pa smartphone kunoita kuti chishandiso chisashome uye zvinotarisirwa kuti Cupertino kambani ichafamba uye kugadzirisa dambudziko nekukurumidza kupfuura gare gare (Chipiri?), Chinhu chavanogona kugadzirisa vasina kutanga vhezheni nyowani yeIOS. . Kusvikira nguva yacho yasvika, tinogona edza mhinduro dzakasiyana izvo, nepo chiri chokwadi kuti vachaderedza ruzivo rwevashandisi zvishoma, ichokwadi zvakare kuti zvinogona kubvumidza avo vanobatwa nedambudziko rinonetsa kuti vashandise chishandiso "zvakajairika".
1 Maitiro ekugadzirisa zvinongedzo zvinowira muIOS 9.3
1.1 Bvisa Safari Mazano
1.2 Bvisa nhoroondo uye dhata rewebhusaiti
Maitiro ekugadzirisa zvinongedzo zvinowira muIOS 9.3
Pamhinduro dzatiri kuzopa nhasi, unogona kusarudza imwe kana dzakawanda. Zvakanakisa kuyedza imwe yacho uone kuti zvese zvinoshanda here "zvakajairika". Kana zvisiri, edza imwe mhinduro. Tichakurukura kusvika kumatatu sarudzo, asi zvakanakisa kuyedza kuremadza zvishoma nepazvinogona.
Bvisa Safari Mazano
Mhinduro iyi yakashanda nguva pfupi yadarika apo zvaive zvisingaite kufamba kubva kuSafari, chimwe chinhu chakagadziriswa naApple pasina kuburitsa vhezheni itsva yeIOS. Tichavaremadza nekuita zvinotevera:
Mukati meSafari, tinoremadza Mazano eS Safari
Bvisa nhoroondo uye dhata rewebhusaiti
Isu tinovhura Zvirongwa.
Semumhinduro yapfuura, tinopinda Safari.
Tinobaya pane Zvakajeka nhoroondo uye data rewebhusaiti.
Uye pakupedzisira, isu tinogamuchira nekubaya paChenesa nhoroondo uye data.
Zvingaitwe sei neimwe nzira, ngatiendei kuSafari.
Isu tinotsvedza uye tinobata Yepamberi.
Yakashanda kwauri here? Usazeze kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Kuve nedambudziko nema link muIOS 9.3? Edza izvi mhinduro
kana ichishanda 🙂
Kwandiri kubva kune zvinongedzo mune yangu email, hapana chinoenda ... Ndinovimba chazadzikiswa uye ndinomirira nhau dzako senguva dzose!
Ndine ipad mini. Izvo zvinongedzo hazvishande kwandiri kubva pandakagadzirisa. Uye kubva kuemail yangu, kana ndikaedza kuivhura, inorembera uye unofanirwa kuvhara zvese kuti udzokere kumeseji.
Uye ini ndakaedza ese mazano akapihwa uye hapana imwe yadzo yakashanda.
Icho chinhu chinonetsa chandinotarisira kuti chichagadziriswa munguva pfupi iri kutevera.
Pindura kuna Lucila
Yakandishandira pamwe nekubviswa kweiyo Java script
Yakashanda, ndatenda !!!!! Kuve Chipiri uye kugadzirisa dambudziko rakaenderera. Mubvunzo; Tinofanira here kuchengeta iyo Safari neJava Mazano akaremara?
Dhanieri p akadaro
Mhoroi, ini ndakaita shanduko dzakataurwa uye zvinoshanda sepakutanga.
Pindura Danieri p
Noah Torres akadaro
Izvo zvinoshanda, ini ndanga ndatopererwa! Ndatenda.
Pindura kuna Noé Torres
KUBVIRA YEKUPEDZISIRA YEKUPEDZISIRA WHATSAPP YAKANYANYA, KUTI UGONESE KUBVA KUNYAYA DZESE NDINOFANIRA KUVHA KUSVIRA ... NDINOGARA NDINOSHAMISWA, HANDI KUZIVA ZVEKUITA
Pindura kuna LIDA
Coco Suarez akadaro
Chirango? Chinhu chakafanana nekuvaratidza paruzhinji kusvikira vatendeuka kuzvivi zvavo ... Hahaha
Pindura Coco Suarez
MuMail, manotsi, mameseji, WhatsApp, kana uchiedza kuteedzera chinongedzo, inopunzika.
Kutsvaga muGoogle ini ndinoshandisa iyo Google APP, mhedzisiro yacho inoshanda.
Zviri Kufamba sei! Ndine matambudziko neSafari neYandex, kazhinji ndaona matambudziko kurodha dhata mune ese maficha, uye dambudziko harisi iro wifi yekumba, iiyo iPhone .. Zvakanaka kuziva nezve izvi mune posvo, mumwe munhu ane izvi?
Hongu, kwete, hapana imwe yedzimwe nzira nhatu yakandishandira. Pandinopa chinongedzo chinorembera pandiri !! Zvisinei, ndinovimba Apple ichagadzirisa izvi nekukurumidza kana zvichibvira kana uchine imwe sarudzo yekuyedza imwe mhinduro.
Pufff, ndeyekuti iyi iOS yatove kuenda kupiss uye kusatora donhwe mudiwa, ndeyekuti ishiti mushure meimwe, zvinoita kunge isina magumo. Uyezve vanhu vanotaura nezve mamwe masisitimu, asi kana iOS haisisiri mumvuri wezvaive kuna Mwari! Mune imwe iyo kana nguva isina kuchinja otomatiki nekuchinja kwenguva (izvo zvakakonzera mamirioni avanhu kunonoka kusvika kubasa kwavo), mune imwe iyo kana bhatiri rakaburitswa nekukurumidza zvakanyanya kupfuura zvakajairwa, wedzera uende uye zvino izvi zviri mu yakamirirwa kwenguva refu iOS 9.3.
Kuti Apple haina kutonga pamusoro payo? ... Eya, senguva dzose, ikozvino mhosva ichave nevashandisi nekuti ivo havazive kuisa kana kudzvanya chinongedzo, seapo AntenaGate iyo maererano neApple yakaitika nekuti vashandisi vakaita ndisingazive kutora foni, amai verudo vakanaka, zvinonyadzisa sei, zvinotyisa sei.
Pamberi, pawakatenga iPhone uye ukabhadhara zvawakabhadhara pafoni, iwe wakazviita nekuda kwekukanganisa kwayo, nekuti zvese zvawakaita, waiita zvakanaka kwazvo, nekuti yakanga isina zvikanganiso zvakaitwa nemamwe masystem. Kwenguva yakati zvese izvi zvakanyangarika uye iPhone ikakundikana kana inogona kukundikana futi kana kupfuura mamwe masisitimu, saka zvine musoro izvozvi kubhadhara izvo zvakakosha iPhone kana iine matambudziko akafanana, kana zvimwe, kupfuura mamwe masisitimu, Hardware yayo iri yakadzika zvishoma uye pamusoro, vanobvisa kubatana kwepasirese kusiya kwavo? Ehezve, ini ndiri kuwedzera uye kufara kuti ndachinjira kumucheto weS7. Uye chenjera! Ini handisi kufara nezverudzi urwu rwemashoko akajeka sekristaro; Ini ndinongovimba kuti zvinhu izvi zvinomutsa vanhu, kuti vanoita uye kuti mukuita kudaro vanoita kuti Apple itore uye vadzosere iyo iPhone kune zvayaive, yakanakisa nhare mbozha pasi.
Zvichida izvi zvichave nechokwadi chekuti anotevera akakosheswa haana kuunzwa seyakajairika, sekushanduka kwepasirese tambo dzinoverengeka dzenylon dzewatchwatch yako, zvinova ndizvo zvakaitika muzwi rekupedzisira, mumaonero angu chiitiko chinosekesa uye chinonyadzisa.
Zvakanaka, ndine dambudziko iri kubva pandakatenga foni muna Ndira 6s pamwe, uye ndichiri kuenderera nayo, neIOS 9.2 mushure mekufona kwakawanda uye Kumisikidza seyatsva uye neApple ID nyowani, vakachinja foni uye tinoramba takadaro , saka izvo zvandinoona kana kukwidziridzwa kuri kuitika kune vanhu vazhinji, ndinoramba ndakamirira, zvechokwadi ndanyadziswa zvachose, foni isingabatsiri kwandiri, isu takafanana nepepa rehuremu, haivhure chero zvinongedzo, chete nezvimwe zvinoshandiswa,
Ini ndakakanganwa kutaura kuti dambudziko iri neIOS 9.3, isu takatodhonza vanhu vazhinji neIOS 9.2 kubva munaNdira zvakanyanya kana zvishoma, uye isu tinoenderera tisina mhinduro
Jose Manuel Puig M akadaro
Ngirozi ini ndichapinda mune ino foramu kukukwazisai, pano mushandisi we i Runhare 4s anotaura newe nezveavo Tim Cook akatanga muna 2011 muna Gumiguru ndinotenda neiyo i Os 5 uye mazuva gare gare Genius yaSteve Jobs yaizofa, Ndine iyi terminal kubva muna Chivabvu 2015 uye ndakashamiswa nekuvandudzwa kwayo nekuti ndinofunga ndiyo terminal (Runhare) iyo inogona kugashira mhedzisiro yakawanda uye ndiko kurema uye chikonzero chemutengo, zvisinei ini ndoda kukuudza kuti ndinofunga zvino Iva nguva dzeGiant Microsoft, ine yayo Lumia uye yayo hombe Windows 8.1 Blue inoshanda sisitimu uye iyo yekuvandudza kuWndows 10 iri kuuya, iyo yatove mamwe zvikwata ari mudhara vatouya nayo .. Edza Microsoft's Lumia, hauzombozvidemba . Ini ndaive neyekupedzisira-kumagumo Lumia 520 uye zvainakidza, yangu inotevera mudziyo haizove inodhura ini Runhare, asi 640-inch Lumia 5.7 Xl inouya neWindows 8.1 Demin.
Pindura José Manuel Puig M
Mhoroi, José Manuel. Handidi kubheja pane izvozvo. Nhasi vaita chiitiko uye havana kutaura nezveWindows Foni ... Zvinopikiswa kuti vari kuzoisa parutivi.
Zvese zvaunotaura ndezvechokwadi, ndinoziva vanhu vakave nazvo kwenguva yakareba, kunyangwe iine iPhone6, saka handi gadzirise kana kupenga kuIOS 9.3.
Na tf uye muchitoro, mazwi akanaka kwazvo asi kubva pane zvaunoona ivo havasati vagadzirisa chero chinhu uye chokwadi chiri kuona mabhenefiti e tfs. shamwari, ndinofunga kuti pachiitiko chidiki diki ndinochinja uye ndine urombo nekuti ndave neApple kwenguva yakareba asi ndinoona kuti yakarasikirwa nenzvimbo zhinji
Pindura kuna Angeles
ios 5 zvachose akadaro
usagadzirise. kuti iwe unoda kuomesa hupenyu hwako. chii chaunoda gehena ios 9.3? kana iwe uine idevices uye ichishanda, usagadzirise !!! Usaomesere hupenyu hwako. chii chaunopa iis 9.3 chausisina? Kuchinja kweusiku? Ndeapi mabhuru. nekuti iwo anga ari matambudziko e-rl kwemakore, kuisa zvisina musoro uye zvisina basa bhuru rei? Zvekuteerera ku4 dzakapusa geeks dzichikumbira "hunyanzvi"? Zvakanaka tora geroma, kubva paiyo ios 7 ivo havana kurova bhora, yega yega yekuvandudza yanga yakaipa kupfuura imwe. Nzira chete yekuti idevice yako ishande zvakakwana uye pasina matambudziko ndeye kuichengeta ios yekutanga iyo inouya nayo. Iphone 6s uye ipad mini ine ios yekutanga uye 4 yakakosha jailbreak tweaks uye voila, pepinacos kubva idevices. Uye ini handinzwe kuvandudzwa muhupenyu, hapana imwe isingabatsiri nzombe yeiyo nyowani inodiwa kwandiri. Kana iwe uchida kuve unofara, HAUYE kugadzirisa !!
Pindura ios 5 zvachose
Hapana, zvinongedzo zvakadaro hazvishande mune mamwe maapp ... Kwete kunyangwe nekutangazve kana kutangazve ne iTunes, mushure mechinguva inodzoka. "Botch"; Zvinoita sekunge Apple inoti ichagadzirisa munguva pfupi.
Iri harisi dambudziko neIOS 9.3, ini ndanga ndatova nedambudziko neshanduro yapfuura, ndaifanira kutangidza iyo iPhone seyatsva uye yaishanda, zvino pavakaburitsa iOS 9.3 vakaivandudza uye yakashanda zvakakwana kusvika nguva yapfuura kuti zvakunditadza zvakare.
Chaizvoizvo, harisi dambudziko ne ios9.3, yatobva kuBehind, ichiri kuenderera nayo, inogadziriswa kwechinguva, asi mushure memazuva mashoma inodzoka, ikozvino zvinoita sekunge vakaiwedzera neyekuvandudza, nekuti tarisa zvirinani kuti uve vanhu vazhinji, kana vakagadzirisa, nekuti ini ndaigona kuyedza zvaunoda, hazvigadzirise, mushure memazuva mashoma zvinoenderana nekushandiswa, iko kukanganisa kunodzoka
Ini handizive kana ichingobata chete mamwe mamodheru, ini handina kana dambudziko paIpad, iri chete pa6s plus
Ndine dambudziko iri pane yangu iphone 6 ine ios 9.3 uye neiyo mini ipad ine ios 9.2
Saka akawanda mabheta ekuti aumburuke saizvozvo, Apple hapana mubvunzo kuti ndizvo zvayaimbove ...
Ndatenda zvikuru nezano rakandigadzirisa kwenguva. Zvino tarisira kuti vanogona kugadzirisa zvese nekukurumidza.
Ndine dambudziko rakafanana iPhone 6 128GB, ndichiikwevera kubva 9.2.1, haina kuvhura zvinongedzo kubva kuapp, maemail kana safari yekutsvaga. Kana iwe uchidzorera senge nyowani zvinoita sekunge zvinoshanda, asi zvakakodzera kurasikirwa zvese zvigadzikiso, mapikicha, uye kugadzirisa zvekare zvese zvinoshandiswa kuitira kuti sezvavanotaura, zvikundikane zvekare ??. Ndakaedza kudzoreredza makopi eitunes, icloud uye ndisina mhinduro. Kana ukadzima Java, inoshanda chete zvinongedzo, asi iwo mapeji anoda java, zvine musoro haashande.Kune imwe nzira here kuTunes kwaunogona kudzorera chete maapplication aunoda? Zvikwereti, uye ndinokutendai zvikuru
Kuenda kumagadzirirwo, uye kushandura injini yekutsvaga inogadziriswa ... hazvishande neGoogle kana Yahoo ... neBing inoshanda ....
Ndakave nedambudziko iri muIOS 9.2 mushure mekuisa adblock. Ndakataura neApple uye mushure mekuisazve iyo iOS zvakare ini ndakanga ndichine dambudziko saka ndakatanga kuburitsa maapplication kusvika ndaona kuti dambudziko rakabva kune yekushambadzira blocker. Mushure mekubvisa iyo app, zvese zvakakwana
Zvakanaka, ne iphone 4s, ipad 3 uye ipad 4, zero matambudziko. Chinhu chega chandinoona ndechekuti bhatiri rinogara zvishoma pane muna 9.2.
Pindura kuna juanca
Yakandishandira zvakanaka neshanduro 9.2, kamwe kamwe zvinongedzo zvakatanga kusashanda, ndakagadzirisa kusvika pa9.3 uye zvakafanana nezviratidzo zvako, zvirinani kuti unogona kushandisa chimwe chinhu chiri nani. matambudziko ekutanga
Pindura kuna AngelNavarro75
Mutumwa mudiki akadaro
Izvi zvinonyadzisa, nharembozha dzakakosha mari zhinji kuti vape rudzi urwu rwematambudziko, isu tese tinofanira kunyunyuta, panguva ino ndatumira maemail mashoma kukero ino.
Pindura kuna Angelito
Ndakaita ese matatu shanduko kune yangu iphone 3 uye ICHINOSHANDA. Kutenda nemazano ako.
Lorraine Rojas akadaro
Hapana kana imwe yesarudzo nhatu yakashanda pafoni yangu 🙁
Pindura kuna Lorena Rojas
Luis Echavarría akadaro
Kugadzirisa java kwakandibatsira kumisikidza zvinongedzo zvekutsvaga, asi handikwanise kuvhura zvinongedzo zvinouya kutsamba yangu, zvinova zvinoshungurudza, nekuti ini ndinoshandisa google nhau uye handisi kuona zvavanonditumira kubva ino saiti.
Pindura kuna Luis Echavarría
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri ... iyo Java nyaya yakagadziriswa musafari, asi zvinongedzo kubva kune zvimwe zvinoshandiswa hazvitakure chero chinhu, pandinovhura peji X tpc ndinogona kubaya chero chikamu chepeji kungovhura uye ndizvozvo.
Ing david gutierrez akadaro
Zvakandishandira asi gadziriso inoshaikwa kune iyo tsamba
Pindura Ing david gutierrez
Neraki ndakaverenga zvese izvi… .. ndanga ndodzoreredza nharembozha, HAPANA CHINOFAMBA, ITRAVA, INOMIRA PAKUFUNGA… .. Steve ANODZOKA X MWARI !!!!!!!!
Zvinosemesa sei Apple zvine maapdices ayo izvozvi handikwanise kushandisa yangu iPhone csmr iyo coleraaaaaa uye ndinongoishandisa kutarisa maLinks, kutumira maemail nezvimwe
Izvo hazvishande kudzamara Apple yaburitsa inogadziriswazvino kukanganisa ... .. Zero reiyo iOS 9.3
Pindura kuna Alliure
Iyo Java chinhu chinoshanda asi nenzira iyoyo, hombe shiti pa9.3 Ndinovimba ichagadziriswa munguva pfupi iri kutevera
Daniel R akadaro
Hapana chinhu chisati chashanda kwandiri kuti ndikwanise kuvhura ndinofanira kubatisisa pasi ndovhura mune itsva tabo ndobva ndatsvaga iyo nyowani tebhu uye saka inovhura.
Pindura kuna Daniel R
Mhoroi, ndine urombo kwazvo nemi, asi kune rimwe divi ndinofara negaffe ine ios 9.3, kuona kuti vanozozvigadzirisa here, kune avo vedu vanga vachinetseka nedambudziko iri kwemwedzi mitatu ikozvino, akati nekukurumidza, Apple haifungi kuti ndichadzokorora newe zvakare, zvakadaro ndinovimba vanoigadzirisa
Uku kunyepa, bhagidhi yanga ichingoitika kweinopfuura mwedzi miviri kubva payakatanga kwandiri, yakatanga na2 mushure mekugadzirisa bhagi iyo safari yaivhara painodzvanya pabhawa rekero, iyo bhagi inotora nguva yakareba uye vanoibvisa Izvozvi nekuti yapfuura vanhu vazhinji asi mhosva haisi 9.2.1, pachokwadi inogona kugadziriswa iri nyore asi isu tinofanirwa kupa zvibodzwa zvatinazvo nekudzorera se "NEW IPHONE" uye kudzima kopi ye icloud dspues kupora data kuburikidza neakaunzi icloud manotsi, vanobata navo, mapikicha, nezvimwe ... chete maapplication anogona kutorwa pasi gare gare akarasika, asi mhosho yabuda chete. post, rombo rakanaka uye kwaziso
Zvakanaka, ini handina kuzvigadzirisa, ivo vakachinja foni yangu zvese zvitsva, neid id nyowani, ndakarasa zvese, uye mushure memazuva mashanu zvakafanana, saka ndave neinenge mwedzi mitatu (5 euros foni) zvakadaro
Izvo zvakashanda, asi kune zvinongedzo mukati memapeji asingavhure. Zvinosuruvarisa kuti ini handizive nezve chirevo chepamutemo naApple.
Hapana chakandishandira. Kubva iyo yekuvandudza ini handikwanise kuwana chero chinongedzo. Mamwe ese maapplication anoshanda.
Yakandishandira ini chete ndichibvisa iyo Java script asi zvinongedzo kubva kumaemail .. hapana !!!!, isu tichamirira chigamba… .Tariro yakaedzwa !!!!!!!!!
Ehe, kune avo vasina kana izvi zvakavashandira, edza safari nekudzvanya iro repakati bhokisi pazasi (iro rinokutumira kune mamwe mafomu) kumutsa iyo "Kumbira izere webhusaiti", kuti ugone kufamba newebhu yePC .. inoshanda
Ndine urombo Carlos, handisi kunzwisisa, unogona kudzokorora tsananguro yacho here?
Chikepe changu akadaro
Ini ndakaita nhanho nhatu uye zvino Safari inoshanda, asi tsamba hapana kutaura ichiri yakavharwa!
Pindura kuchikepe Changu
MuSafari kana iwe uchifamba mumenyu yepazasi pane bhokisi rine museve wepakati kumusoro, izvi zvinoshandiswa kugovana zvinyorwa kuburikidza neemail, whastapp nezvimwewo, zvakare ine sarudzo mubhoni repazasi riri grey rine chiratidzo chinoratidzika terevhizheni inoratidza iyo "Kumbira izere webhusaiti", uye inokuratidza google sekunge iwe uri pane pc.
Pindura kuna Barbara
Izvo hazvishande kwandiri. Zvese zvakavharwa, mumwe mubvunzo: 9.2.1 inogona kuiswa?
JUAN ANTONIO akadaro
Pindura kuna JUAN ANTONIO
Ini zvakare ndine dambudziko pane iPhone 6s, zvaitove zvichiitika kwandiri neIOS 9.2 asi kana kukwidziridzwa kuenda ku9.3 kwanyanya, haina kuvhura chero chinongedzo uye pamusoro payo Safari yakavharika, chimwe chinhu chisina kumboitika kwandiri uye kuti ini ndaisatarisira kuti zviitike kwandiri ndisati nda
Zvakaitika kwandiri senge iwe Israeri asi ini handina kuita chero chinhu ini
Nhasi ini ndakatovhara tsamba yangu kana ndichisarudza chinongedzo paPad mini.
Ini ndaifanira kutangazve.
Yaishanda muSafari asi kwete mutsamba.
Izvi zvinonyadzisa. Ndiri kumusoro kweapuro ngowani. Ndine iPad ine ios 9.2.1 uye chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri. Zvakare, dzimwe nguva Safari kana tsamba yangu ino vharwa. Uye hapana kana mumwe kubva kukambani anopa chero tsananguro. Yakazara, pano semapenzi ekumirira ... Uye nepo, ndiani anoda kushanda ipapo GARLIC uye MVURA.
Izvo zvinongedzo zvinoshanda muSafari, asi hazvivhure zvinongedzo zvemaemail, uyezve, zvinodzivirira maemail
Chekutanga pane zvese, udza iyi posvo kuti kubva pane zvaunoona dambudziko harisi kubva kuIOS 9.3, rinouya kubva kare kare uye ikozvino rave kutonyanya kupararira. Saka zita racho harina kukodzera, zviri pachena kuti pane dambudziko rakakomba. Zvakaitika kwandiri mangwanani ano uye ini handina kugadzirisa chero chinhu.
Ini ndakanyora nezuro ndichiti ndinoziva vanhu vakatambura kwemwedzi uye »vakarwa» vega .Zvino isu tiri vazhinji uye avo vanozoenda, vachatofanira kuita chimwe chinhu uye kugadzirisa icho panguva imwe chete.
Bvumiranai zvizere, dambudziko harisi ios 9.3, iri PEJI rinogona kutogadzirisa STATEMENT uye ECHO dambudziko rakakomba iro rakatoitika kwenguva yakareba uye kuti kubva pane zvauri kuona, ikozvino iri kuita zvisinei nesystem yauinayo, ndinoziva munhu mumwe ane ios 9.2 anokufarira Ngirozi, zvatanga mangwanani ano uye Apple PASINA KUZIVISA
Mhoroi, Angeles Nieves: Iwe unonyora uye kupindura nemumwe Nick here? Iwe uchaenda sei kutora zvichemo zvako zvakakomba kana iwe uchida kuti titende kuti muri vanhu vaviri vakasiyana vanogunun'una nezve chinhu chimwe chete?
Kwete Pablo, isu tiri vanhu vaviri, chete
Ngirozi ndinoshandisa foni yangu, handina kuzviziva, ndine hurombo,
Hi Pablo, ini ndiri Angeles uye ndakashandisa nhamba yefoni yaNieves mune yekudyira nekuti ini ndakanga ndisina yangu paruoko, asi ini ndakaisa ruzivo rwangu (zita neemail) .Dambudziko rangu renhare ratanga mangwanani ano uye ikozvino neIpad Mhepo.
Ndine musangano wefoni mangwana na11 am neApple service. Kunyangwe ini ndisingafunge kuti ichagadzirisa chero chinhu kwandiri nekuona zvese zvakaitwa naNieves nevamwe vanhu pasina chimwe chinhu kunze kwekurasa dhata.
Ndine urombo kuti ndakunetsa kana kusimudza "kufungira" dambudziko rakakomba, ndine iphon6 uye yakareba kuApple. Haisi iyo chinangwa changu kunetsa kana kunyengedza, kungo taura dambudziko rangu nekuti ndinofunga kuti kana paine vazhinji vedu vanozove nechido chakati wandei mukupa mhinduro uye nekuwana mhinduro
Zvinotaridza kwandiri kuti mhando yakaita seino, iyo inotengesa zvigadzirwa zvinodhura zvakadaro, inofanira kutarisa zvese zvinogadziridzwa isati yaiburitsa. Chakaipisisa pane zvese ndechekuti hapana munhu akazvipira kutsanangura kutadza uku uye kuti zvinokanganisa vanhu vazhinji. Kambani yakadaro inofanira kutarisira zvakanyanya vatengi vayo.
Ndinovimba kuzvigadzirisa munguva pfupi iri kutevera.
Enrique Aponte akadaro
Dambudziko harisi neIOS 9.3, ini ndichine iOS 9.2.1 uye zvakatanga kuitika kwandiri nezuro… uye ndakave nefoni kwemwedzi miviri. Saka dambudziko rakakomba kupfuura zvavanoda kuti tione!
Pindura Enrique Aponte
Santi Costa akadaro
Zvakakwana. Hongu zvinoshanda. Ndatenda
Pindura Santi Costa
Ngatione kana vachizvigadzirisa nekukurumidza.
Pindura kuna Lena
Nhau IPhone ichangonditumira email kuti nditsigire kunyorera, asi handikwanise kuzviita nekuti kuyedza »kusimbisa kuenderera» hazvishande uye zvakavharwa.
Carlos Tarabochia akadaro
Kutenda chiuru. Ndakavhura mushure mekubvisa iyo Java. Ini ndinofunga apple riri deflating !!!
Pindura carlos tarabochia
Zvinosuruvarisa ,,, ndinodemba zvakadii kuti zvakaitika kuApple world ... ndicho chiitiko changu chekutanga, ndakatenga iyo iPad Air 2 yepaston uye mune yekutanga yekuvandudza zaaaaaas. Yakakwana isingashande Safari, chrome, firefox ... njodzi. Makorokoto machinda eApple ... semunhu akanaka wekare Jobho akasimudza musoro ...
Pindura kuna Klg_77
Yangu iPhone 6plus haishande iyo inobata iyo skrini sezvo ini ndichigadzirisa iOS 9.3 inoshungurudza zvikuru
Ndine ipad mweya ine 9.2.1 uye zvakatangawo kuitika kwandiri neSvondo masikati.
Pablo, ndinofungawo neruremekedzo rwese kuti zita racho harina kunaka sezvo risiri kana ne9.3 uye kuti parizvino hapana mhinduro, izvo zvinowoneswa pano nezvakanakisa ndezve "ñapas" izvo zvisina kugadzirisa chero chinhu.
Ini ndinoona zvinhu zviri kuitika neApple. Zvinotaurwa nevamwe venyu ichokwadi, matambudziko aya haasi kubva ikozvino, tave tichivazvuzvurudza kwenguva yakareba asi nekuda kwezvikonzero zvikonzero chiitiko ichi chiri kuwedzera sekunge chiri chirwere chikuru.
Ini ndinofunga kuti zvakapihwa ukuru urikutorwa nenyaya iyi yese, zvingave nyore kuudza sangano rakafanana neshanduko.org, hapana mushonga unodzivirira hutachiona pane kuvarwisa panonyanya kurwadza, mune izvi, kushora iyo mhando.
Kungotaura zvishoma (kuti usandidana zvinorema)
Nhasi pa11 ndakataura neApple Technician uye akandipa mhinduro yekuisa Bing seinjini yekutsvaga. Ndakamuudza kuti iyi yaisazove mhinduro uye yakanga yave nguva yekuti vataure chimwe chinhu kuti paitova nevazhinji vedu vaive nedambudziko. Ini ndichafona zvakare nenhamba yangu yechiitiko kuti ndione kuti ini ndichiri mumwe chete.
NDATENDA WAKO ZVIKURU, zvakagadziriswa, hazvina kukwanisa kuvhura zvinongedzo muinjini yekutsvaga
Ndatenda nechinyorwa chako
Sebastian gottschalk akadaro
Ini ndaifanira kuita zvese zvinhu zvitatu uye ikozvino zvinoshanda. Shit iyo foni yepamusoro inoshanda seizvi!
Pindura Sebastian Gottschalk
Zvakanaka ... kuzorodzwa zvirinani, kuwana maforamu mune izvo zviri kutaurwa zvakafanana nezvinoitika kwauri ... kunzwa uchiperekedzwa kunoita kunge kunoita kuti dambudziko riwedzere ... ... asi harisi iro ... ... zvikanganiso izvi zvinoita kuti basa rinyanye kuoma ... uye zvakaipisisa pane zvese, kuona kuti chinhu chete chaunowana kunyunyuta uye kwete mhinduro chaidzo ... .. ndanga ndiri fan yeapuro imwe nguva ... uye ini ndiri kuenda kukupa iwe kumahombekombe ekutsungirira / kuvimba ..... Ndinovimba kugadziriswa nekukurumidza sezvazvinogona !!!
Iniwo, sezvo ios09 yekupedzisira yakagadziridzwa, yakarongedzwa neapuro kunatsiridza sevhisi yayo, handikwanise kufamba nemumafambiro ekutsvaga kwesaaf ... Ini ndakapa sarudzo sarudzo dzeiyi oina uye ndaigona kufamba nekumisa Java
Ndinovimba kuti apuro inogadzirisa matambudziko aya ,,, hazvina musoro kuti havana kuyedza chigadzirwa mune chimwe chinhu chakakosha ... dambudziko iri rakamuka svondo rino.
mabook haashande, anovhara kunyorera ega: /
Hongu zvakashanda asi kuita nhanho nhatu.
Hapana chakandishandira. Kubva kuWathsapp neMail, ini handina kuzvigadzirisa, asi bhurawuza rave naro. Ini ndakaisa Dolphin uye yakakwana.
Mushure memakore mazhinji asina zvimisikidzo… Mac's, appel tv, skrini, iPhones….
Ini ndinoneta neakawandisa shit pachikamu cheappel, ini ndinotanga kusaona chikonzero chemubhadharo wakakwira.
MHURI YAKANYANYA KUNA MUNHU WESE AKABATWA NDEKUDZOKA KUIOS 9.2.1 KO KANA UCHITendera VANHU VAZVIITIRE. CHETE CHETE KUTI UITE BACKUP YEMIFANANIDZO, AGENDA, WHATSAPP ... ZVAKADARO NEKUTI BACKUP COPY HAINGAZVIKWANISIKANE NEZVADZIDZO SYSTEM. ZANO REMUNHU WESE: NGAZVIEDZESE KUMASHURE MBERI MUMWE MUMWE MUMWE UENDE PASI PEKUVIMBISA CHINHU, NEKUTI HAUSI KUDYA ZVAKAVARA SEZVINO. NGUVA DZINONYANYA KUNYANYA KANA KUTSva HAZVISI ZVAKANAKA. PAMUSORO
Ndichine 9.2.1, handimbo gadzirise 9.3 uye kubvira Svondo chinhu chimwe chete chinoitika kwandiri. Izvi zvinoratidza kuti harisi dambudziko chete kubva kumagadziriso ekupedzisira.
Izvo hazvina basa kana iwe uchigadzirisa kana kwete ... ini ndaive ios9.2.1 uye ini handina kuvhura mapeji kana chero chinhu ndikagadzirisa kuitira kana zvaramba zvakadaro.
Pindura kuna javi
Ini handikwanise kupinda chero internet peji ... ndakaedza zvese uye hapana chinoshanda ...
Ndakaita zvese zvavakataura uye hapana chandinacho ndine iPhone 6plus uye hapana chinoshanda
Yakandishandira ini !!
SIII ANOSHANDA 🙂 PASHURE PAKAIPA, NDAKANGA NDATOFUNGA KUTI NDAKAKONZESWA… NEZVAKAITWA… .. !!!! NDOKUTENDA ZVIKURU!
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri kubva Mugovera manheru pandakaburitsa Ios 9.3 kubva panguva iyoyo pane iyo iPhone 6S uye pane ipad mweya, ini handigone kuvhura chero zvinongedzo. Ndakafonera Apple technical support foni kaviri uye vanondiudza kuti havazive zviri kuitika uye kudzima Java kuti vaone kana ichishanda, asi iyo haisiyo mhinduro yefoni yemutengo uyu ... zvakanyanyisa! !
Iyo Java chinhu kana ichishanda. Kunyara kuti hunhu hweiyo iPhone sevhisi iri kudzikira
Zvinotyisa., Ndiri kuyedza kuisa tweetbot uye haina kuvhura chinongedzo kuti isimbise iwo ma tokeni futi.
Yakanaka kwazvo, ini ndaifunga kuti dambudziko raive rangu, zororo repamusoro raitove kushanda pa100
M. Moreno akadaro
Ini ndaifanirwa kuita matatu ekugadzirisa iwe aunofunga. Yakashanda pakupedzisira. Kunaka! Ndatenda.
Pindura kuna M. Moreno
Izvo hazvina kundishandira, chii chingaitwe mune iyo kesi, ivo havazive kuti iyo nyowani nyowani ichave iripo kuvandudza kusagadzikana uku muchikwata.
Kutenda nhanho !! Ndakanga ndapererwa, mushure mekuita shanduko, kudzima uye kutanga iyo iPhone inoshanda zvakajairika!
Ini handinzwisise kuti Apple haipi sei mhinduro nekukasira!
Manuel Caldera Lab Proden akadaro
kukwana, ndatenda zvikuru
Pindura kuna Manuel Caldera Lab Proden
Hove diki akadaro
Kutenda kwazvo! Ini ndanga ndave kupenga zvese, ndanga ndisiri kuenda ku safari uye ndaifunga kuti foni yangu yanga yatotyoka (nekuda kwangu) Sarudzo 1 ne2 ndanga ndatozviedza ndega, asi dai ndisina kuverenga 3 zvingadai zvichiri grated.
Izvo hazvina kundishandira !! Ndakaedza ese matatu ndikatangazve uye zvinoramba zvakafanana the
Norberto Tussinger akadaro
Kwayedza ese matatu sarudzo uye haishande nechero pane iPhone. Zvese zvinoshanda zvakanaka paIpad Mhepo pasina chero chinogadziriswa.
Pindura kuna Norberto Tussinger
Batsira !! . Pane chero munhu anoziva kana iri software dambudziko rekugadziriswa? sezvo zvisati zvashanda zvakakwana. Izvo zvinondipa kusahadzika ndezvekuti ini ndakaedza kudzikisira kuIOS 6 uye ini ndaive ndichiri nedambudziko rakafanana. Chero zvataurwa pamusoro pazvo zvinogona kundibatsira ndapota? 🙁
Pindura kune mariodesing
Ndine iPhone6 ​​uye ndinogadziridza kuIOS9.3, dambudziko randinaro nderekuti handigone kufona, kana dhata, sekunge ndisina bhalansi ... nzira chete ndeyeWi-Fi, ndiani angandibatsira? ?????
Alex Lavall Martinez akadaro
Ndine dambudziko neIOS9.3 pane iphone 6S, handizive kana ndichifanira kunge ndiri ndega wandinotsvaga wekubata naye muSotlight, haizondibvumidze kufona kana kutumira mameseji zvakananga, ndinofanira pinda. Uye kana ini ndikawana iwo wekubatana kuburikidza nemwenje, hazvinditorere ini kuenda kune faira reiye wekubatana ari mubvunzo, asi zvinongovhura iyo yekudyidzana application.
Izvo zvakafanana zvinoitika kune mumwe munhu here?
Pindura kuna Alex Lavall Martínez
Uye kana tikatanga kukumbira kudzoserwa mari yemafoni mbozhanhare?
Ndiri kuzopa margin yenguva (zvishoma izvozvi)! Zvakanaka, ini ndinofunga kuti mwedzi mitatu yakwana, kunyangwe mainjiniya ari kutevera nyaya yangu, akabvuma kundifonera uye haasati azviita, nezuro ndakamudaidza uye muchina wekupindura wanga uripo, ndakamusiira nhamba yangu nenhamba yenyaya uye ndichakamirira, vakatonyoresa zvikanganiso zvefoni yangu kaviri, ndakafunga kuti kana zvikanganiso zvikawanda, zvaizokurumidza, isu tichamirira zvishoma
Ophelia Diaz akadaro
Pindura kuna Ofelia Diaz
Ini ndakangokwanisa kuvhura ivo muSafari… muWhatsApp uye mutsamba ivo vachiri vakafanana… inopunzika uye hapana nzira !!
Apple yakafukidzwa nekubwinya panguva ino. My ipad haina kuziva iyo applestore password mushure mekuvandudza uye yangu macbook pro haina kupedzisa iyo yekuvandudza uye ini ndaifanirwa kuita fomati. Mafuta shit kubva kuApple.
Mubvunzo, kupfuura kutadza, sezvo Apple shiti hombe ichizivikanwa nevose, ndeyekuti, mhinduro ichaitwa riini? Kana iyo nyowani nyowani nemabhugi akagadziriswa?
Ini ndinozvipindura-wega uye ndinovimba inoshanda kune wese munhu ... Ndakangozviona. Iyo 9.3.1, sekuratidzwa kunogadzirisa dambudziko …… ngatiyambukei minwe yedu titore !!
Ndisati ndasangana naye ndaive mukukurukura neApple's technical service. Vanondiudza kuti iyo update yakabuda maminetsi mashanu apfuura. 5'27 mb kuburikidza nharembozha uye 5'1Gb kana uchizviita kuburikidza iTunes ... zvirinani iTunes nekuti iri yakachena yekuvandudza. Ndinovimba yakubatsira.
Ndakanga ndiine vhiki nedambudziko rekutadza kuvhura ma link kubva ku safari, nerubatsiro rwamakandipa rwakazogadziriswa !!!
Kicheni yaMay akadaro
Ndakaita zvese zvitatu uye zvakandishandira. Ini zvino ndogona kuvhura zvinongedzo. Ini ndaingoita dambudziko ne iPhone. Hapana chinoitika kwandiri pane iyo iPad. Ndatenda zvikuru nerubatsiro.
Pindura kuna May's Kicheni
Manheru ano ndafunga kumutsiridza 9.3 uyezve 9.3.1 nekuti ndaifunga kuti hazvinganyanya uye uye sezvo ini ndichingo "tambura" kwemazuva matatu hazvingatyise kumirira mamwe mazuva mashoma. Inoshanda pane zvese. Ndinovimba izvi ndezvekupedzisira, kwete senge zvigamba zviviri zvandakapihwa neapuro
Chii chiri pachena kuti kana tiine chiitiko, pamusoro pekutsvaga nyaradzo nerubatsiro munzvimbo dzakanaka dzakadai, isu tinofanirwa kufonera Apple nekuti vane zviitiko zvezviitiko ndiyo nzira "yekufamba" kwechokwadi.
Iye zvino ndinogona kunyoresa pane iyo blog.
Zvakanaka, ehe, gadziridza uye zvinoshanda, (parizvino) rwendo rurefu rwega rwapera, rwekurukurirano dzakatsamwa zvakadaro, ndinofara, asi panguva imwe chete ndakatsamwa nekuti kunyangwe hazvo isina "boka" vanga vasina isu pasina kutarisisa, uye pazvakange zvakadaro, nekukurumidza sei vazvigadzirisa, uye ndine urombo Pablo nezve izvo iwe zvaunoziva kare. Shuwiro yakanakisa
Ndatenda kwazvo, zvese Ok, ndatevera tsoka dzako uye zvese zvanga zvakanaka. NDAKASHAMISWA. Ndatenda zvikuru zvakare.
chete neyekupedzisira yaishanda, asi yakakwana
Nezuro ndakanyora mune ino blog uye kutaura kwangu hakuoneke uye nekudaro hapana mhinduro. Munyika yangu, Venezuela, kugadzirisa 9.3.1 hakuna kuoneka uye. Ndakawana iwo mazano pane ino blog kuti andishandire ini. Ini handizive zvekuita, pamusoro pematambudziko akakomba atinawo, kutaurirana zvisina kunaka pafoni kunowedzera zvese.
danylson batista akadaro
sonia ,,, waedza pa »ongorora ma updates»? hausioneke uri wega ,, unofanirwa kutsvaga
Pindura kuna danylson batista
Ana Martinez akadaro
Ndakagadzirisa kusvika pa9.3.1 asi mamwe mapeji haasati achishanda. Iyo vueling peji semuenzaniso haishande paPad Mhepo kana neyekuvandudza kana nemhinduro dzawakaisa pano, pane iyo iPhone inoshanda. Iyo inokutendera iwe kutsvaga kweKwatangira, kwainoenda, misi ... Zvese zvekudonha-pasi zvinoshanda asi kana iwe ukazvipa kuti utsvage hapana zvazvinoita. Inoenda pane mamwe mapeji asi ini handiwairangarire.
Pindura Ana Martínez
Yakagadziriswa neapuro…. 25mb yekuvandudza inowanikwa, kugadzirisa matambudziko kuvhura zvinongedzo
Kwete. Hazvina kugadziriswa.
Mamwe mapeji anoramba achirovera mushure mekuvandudzwa.
Ndiri pane ios 9.1 pane ipad mini 1 uye chrome haivhure zvinongedzo. Kana safari.
Vanhu ava shit vachiwedzera !! Handife ndakatenga apple zvekare !!!
Mhoroi, ngatione kana paine munhu angandibatsire ... ndine Iphone 5 inobatana neWi-Fi network asi isingafambe, whatsapp, safari, nezvimwe haishande. Izvo zvinongoitika chete neiyo wifi mumba mangu, ini ndakaedza kutangazve iyo router, ini ndaona ese "gadziriso yekushomeka kwematambudziko" dzidziso uye hapana! chero munhu ane chero zano rekuti ndingaite sei kugadzirisa dambudziko? ndinokutendai zvikuru pamberi.
ndine urombo shamwari ndinoda kuita mubvunzo, kana uchikwanisa kuupindura ndapota:
Kana ini ndichipinda mumamepu chikumbiro chinoratidzwa asi hachiratidze mifananidzo pamepu, chekufambisa kana setiraiti, zvinongondiratidza gridhi remepu nezvose zviri mumutungamiri, inogona kunge iri sero iri iPhone 6 ine iOS 9.3.1. XNUMX
Vaongorori vanofanoona kudzoka kweiyo iPhone 4 dhizaini
Google Mepu yeIOS inogadziridzwa nemhando nyowani yekufambisa masevhisi